Fri, Feb 21, 2020 at 10:19am
खाना महोत्सव माघ २८ देखि
चितवन, १५ माघ पर्यटकीय नगरी सौराहामा भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरी खाना महोत्सव गरिने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै खानाको स्वाद दिन यही माघ २८ देखि फागुन ३ गतेसम्म खाना महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको हो । रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल (रेवान) सौराहाले सिसुवार खेलमैदानमा महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो । यो १४औँ संस्करण हो ।..
चन्द्रौटा, ७ माघ तपाई हामी जो कसैले होटलमा खाना खादा सामान्यतया डेढ दुईसय हाराहारी रकम तिरेर एक छाक शाकाहारी खाना खाने गर्दछौँ । तर कपिलवस्तु, चन्द्रौटामा रहेको महाकाल सामाजिक संस्थाले भने अब हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म रु २५मै खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । मङ्गलबार सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सस्तो मूल्यमा स्वादिष्ट र..
काठमाडौं, १६ पुस जाडोका बेला रगत जम्ने मात्रै होइन धमनिहरू समेत कडा हुन्छ । कहिले काही यसैको प्रभावले रक्त प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । यसबाट समेत व्लड प्रेसर बढन सक्छ । जव रगत प्रवाहमा अवरोध हुन्छ । यसले हार्ट एट्याक, हार्टफेल तथा स्ट्रोक (मस्तिष्क घात) हुन सक्छ । चिसोकै बेला बाथ मुटु समेत हुनसक्छ । चिसोले केटाकेटीमा घाटी दुख्ने टन्सिल बढने..
काठमाडौं, २० पुस मह स्वास्थ्यका लागि एकदमै गुणकारी छ । यसको सेवनले शरीरमा स्फूर्ति र ताजापन उत्पन्न गर्छ । तर, यसको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्छ । किनभने अलिकति गडबडीका कारण मह स्वास्थ्यका लागि खतरनाक साबित हुन पनि सक्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार मह खाँदा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ : १. मह अलि गरम वस्तु हो । यसलाई तातो खानासँगै खानुहुँदैन । तातो खानासँगै..
काठमाडौँ, ७ पुस रंगीन फुड बास्केट सुन्दर र आकर्षक मात्र देखिँदैन, जाडो मौसममा यसको पोषक तत्वले पूर्ण आहार पनि प्रदान गर्छ। यो मौसममा हड्डीलाई न्यानोपन प्रदान गर्न, आफूलाई रुघाखोकीबाट मुक्त राख्न तथा आफ्नो परिवारको प्रतिरक्षण क्षमता बढाउन अनेकौं मौसमी फल एवं तरकारी उपलब्ध छन्, जसको सही उपयोग गरी स्वस्थ एवं फिट रहन सकिन्छ। जाडोमा भोक दबाउनु हुँदैन। स्वास्थ्यप्रद तरिकाले कस्तो प्रकारको प्राकृतिक..
काभ्रेपलाञ्चोक, ६ पुस पर्यटकीय नगरी धुलिखेलमा ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को अवधिभर हरेक हप्ता खाना महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा हप्ताको तीन दिन खाना महोत्सवसहित स्थानीय कला, संस्कृतिको प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । धुलिखेलमा पर्यटक आकर्षण गरी बसाइँ लम्ब्याउन योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले जानकारी दिनभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामी भ्रमण वर्षभर हप्तामा तीन दिन..
काठमाडौँ, १७ मङ्सिर सामान्यतया हामी केरा पाकेपछि छोडाएर खान्छौँ । केराको स्वाद लिन धेरै जानेको यो एउटा तरिका हो तर अहिले केराका अनेक उत्पादन बन्न थालिसकेका छन् । इलामको रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुरका विकास राईले केराका ४० भन्दा बढी परिकार बनाएर बिक्री वितरण गरिरहनुभएको छ । गाउँपालिकाको सहयोगमा कैलालीमा गएर तालीम लिएर फर्किएका राईले गाउँमै उत्पादित केराबाट मःमः, समोसा, मिटवल, चिप्स, निम्की, जुस,..
काठमाडौँ, २७ कात्तिक जुन खानेकुरालाई शाकाहारी सम्झेर खानुहुन्छ, त्यो शाकाहारी हुँदै होइन । सेतो चिनी – सेतो चिनीलाई सफा गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यसमा प्रकृतिक कार्बनको प्रयोग हुन्छ जुन जनावरहरुको हड्डीबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले तपाई शाकाहारी हनुहुन्छ भने रिफाइन्ड चिनी नखानुहोस् । बियर वा वाइन – मदिरालाई सफा गर्नका लागि ‘इजिनग्लास’को प्रयोग गरिन्छ, जुन फिस ब्लेडरबाट बनेको हुन्छ । जाम – यदि तपाई..
काठमाडौँ, २३ कात्तिक रेष्टुरेण्टमा गएर खाजा अर्डर गर्न जति मेनु हेरेपनि नेपालीले अन्तिममा मःम नै माग्छन् । हुनपनि शहरमा मःमको माग धेरै छ । अहिले बजारमा बफ, चिकेन, मटन, भेज, पनीरलगायतका धेरै स्वादमा पाइने मःम पाइन्छ । यी मःमको परिकार फरक–फरक हुन्छन् । तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ मःम बारे तलका अच्म्मका कुरा । – मःम पारखीको माग पनि अनेकौं देखिएका छन् । अध्ययन..
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । सेल रोटी एक नेपाली परम्परागत स्वादिष्ट रोटीको परिकार हो । सेल रोटी मुख्य गरि नेपाली समुदायमा दशैं, तिहार जस्ता ठूला चाड पर्वहरूमा प्रयोग गरिन्छ । बनाउने तरिका सेल चामलको पिठोबाट बनाउने गरिन्छ । यस सेल रोटि बनाउदा चामलको पिठोमा आवश्यक अनुसार दूध, घ्यूँ, तेल, चिनी, नौनी, सुजी, मैदा तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीहरूको मीश्रण गरि आवश्यक पानीमा मुस्ने गरिन्छ ।..
काठमाडौं, २९ असोज । धेरै सामग्री राखिएको र पकाउन निकै मेहनत जस्तो लाग्ने देखिएतापनि सजिलोसंगै घरमा मीठो बिरयानी बनाउन सकिन्छ । चिकेन, फ्राई गरिएको प्याज, पुदिना , धनियाँ , दही , ल्वाङ्ग, सुकमेल, तेजपत्ता लगायत वासनादार मसला , तेल , कागतीको रस , अदुवा-लसुनको पेस्ट , हरियो खुर्सानी, जीरा, गरम मसला, खुर्सानीको धूलो, नुन , चामल बनाउने विधि : चिकेनलाई एउटा भाँडोमा राखेर त्यसमा..
काठमाडाैं, २१ असाेज । मासुमा प्याप्त प्रोटिन हुने हुदाँ थोरै मात्रामा सेवन गर्दा पनि शरिरलाई पुग्ने हुन्छ । दसैंमा अधिकांशको बानी के हुन्छ, भने मासु बढी खाने र अन्य सागसब्जी कम खाने तर त्यस्तो गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको पाइन्छ । एकैपटक धेरै मासु खानु हुँदैन । एउटा स्वस्थ्य मानिसले दिनमा एक सय ग्रामसम्म मासु खान सक्छन् । स्वास्थ्य र सफा..
काठमाडाैं, १९ असाेज । नेपाली परिकार चुकाउनी आजभन्दा झन्डै ४२ वर्षअघि नै विदेशी भान्छामा पाकिसकेकाे थियाे । चुकाउनी साकाहारी भाेजनभित्र पर्दछ । संसारका ७५ वटा चर्चित ‘मुखै रसाउने आलुका परिकार’ विशेषांकका रूपमा दुई वर्षअघि निस्किएको पुस्तकमा चुकाउनी समावेश छ। यो नै नेपाली खानाले सम्भवतः पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको हुनसक्ने होटल व्यवसायी कर्ण शाक्यले बताएका थिए। विदेशसम्मै पुगे पनि नेपालभर भने चुकाउनीको स्वाद फैलिन भ्याएको छैन।..
काठमाडौँ, १५ असोज । हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् चाड दसैंं घर–आँगनमा भित्रिएको छ । कतिपयले दसैंलाई ‘मासु खाने’ पर्वका रूपमा पनि लिन्छन् । दसैं र मासु परिपूरकजस्तै भइसकेका छन् । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भनेझैं दसैंका नाममा अत्यधिक खर्च गर्नु राम्रो हुँदैन । आफूसँग जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर दसैं मनाउनुपर्छ । अहिले त देश–विदेशबाट आफन्तसमेत घर फर्किएका छन् । चिकित्सकले जिब्रोलाई नियन्त्रण..
काठमाडौँ, १४ असोज । बाँसको तामाबाट विभिन्न परिकार बनाउछ सकिन्छ । बाँसको टुसालाई सीधै तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, तामाको अचार (मेसो) पनि लोकप्रिय छ । तामा हालेर मासु पकाउँदा थप स्वादिष्ट हुन्छ । खानाको सुरुवाती अर्थात् एप्पिटाइजर सलादका रूपमा समेत यो उपयोगी छ । विदेशीले भने तामाको सुप धेरैथरीका बनाउँछन् ।नेपालमा आलु–बोडी–तामाको तरकारी बढी प्रचलित छ ।यो अत्यन्तै..
काठमाडौँ, २ असोज च्याउमा हामीलाई विभिन्न रोगहरु लाग्नबाट बचाउँछ । तर च्याउ खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि नपुर्याउने च्याउ मात्र खानुपर्छ । साहकारी तरकारीको नाम लिनु पर्दा च्याउ भन्ने बित्तिकै मन नपराउने भन्नेहरु बिरलै होला । यसको स्वाद निकै स्वादिलो हुने भएकाले मानिसहरु च्याउ खान निकै रुचाउने गर्छन् । च्याउमा पाइने विभिन्न खालका खनिज पदार्थले हाम्रो स्वास्थ्यलाई निकै लाभ दिन्छ । कतिपय मानिसहरुले बिषालु च्याउको..
काठमाडौँ, २ असोज ममलाई जस्तोसुकै शैलीमा, स्वादमा र रंगमा तयार गर्न सकिन्छ । यो तपाईंको हातको कला हो । यसका लागि तपाईंसँग जाँगर भए पुग्छ । भनिरहनुपर्दैन, मम सबैलाई मनपर्ने परिकार हो । अहिले हाम्रो दैनिक खान्कीमा मम पनि जोडिएको छ । खाजा एवं नास्तको रुपमा त मम नै प्रिय परिकार हो । भनाई नै छ, हामीहरु रेष्टुरेन्टको मेनुमा जतिसुकै घोत्लिएपनि अन्त्यमा..
काठमाडौं, १ असोज । सोनपापडी मैदा र बेसनको मिश्रणले बन्छ । सोनपापडी बनाउनको लागि जति बेसन लिइन्छ, त्यसको आधा मैदा लिनुपर्छ । सोनपापडी बनाउनको लागि घ्युको आवश्यकता पर्छ । यसमा तेलको प्रयोग गर्नु हुँदैन । सोनपापडी बनाउन सुरु गर्दा एउटा भाँडोमा घ्यु तताउनुपर्छ । घ्यु राख्दा बेसन र मैदाको राम्रो मिश्रण हुनेजति धेरै घ्यु राख्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसमा बेसन र मैदा राख्नुपर्छ । अब..
गलकोट, २० भदौ बर्खामासमा उब्जनी हुने आलु सामान्यतयाः तरकारी बनाउन र उसिनेर खाजाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ तर, बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा ओखलेस्थित बेलढुङ्गा घरवास ९होमस्टे० मा आलुका अनेक परिकार बन्छन् । ती परिकारले आगन्तुक पाहुनालाई निकै लोभ्याउँदो रहेछ । उसिनेका आलु, सिल्टिुमरको चटनी, आलु चिप्स, आलु अचार, आलु रोटी लगायतका परिकारले आन्तरिक तथा बाह्य पाहुनाको मन जित्ने गरेको घरवास सञ्चालक बताउँछन्..
बाँके, १७ भदौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मासुको मूल्य बढेको छ । बजारमा केही महीनायता खसीको मासुको मूल्य अस्वभाविक रुपले वृद्धि भएसँगै उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । भारतबाट खसीको सहजै आयात रोकिएपछि खसीको मासुको मूल्य आकाशिएको हो । चार÷पाँच महीनाअघिसम्म खसीको मासु प्रतिकिलो रु ७०० रहेकामा आयात रोकिनेबित्तिकै मासु बढ्दै गएको हो । अहिले बजारमा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकेजी रु ८००..
चितवन, १५ भदौ तीजको लामो र निराहार व्रतमा भोक नलागोस् भन्नका लागि अघिल्लो रात दर खाने प्रचलन रहिआएको छ । दरमा खाने चीज आडिलो भएमा भोलिपल्ट दिनभर नाचगानमा रमाउन सकिने भएकाले दरमा अनदीको चामलको भात (लट्टे) खाने गरिन्छ । पहाडी समुदायमा लट्टे बनाउनका लागि प्रयोग गरिने अनदीको धान लगाउने प्रचलन कम हुँदै गएपछि चामलको अभाव हुन थालेको हो । पाइहालेमा पनि महँगो..
काठमाडौँ, १० भदौ नेपाली मिठाईको रुपमा परिचित पुष्टकारी बच्चा देखि वृद्धसम्मको लागि प्रिय हुनुका साथै पोषणयुक्त पनि मानिन्छ । यदि बाहिर किन्न पाइने पुष्टकारी नकिनेर, घरमै ताजा र स्वस्थ पुष्टकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो बनाउने विधि एकदमै सजिलो छ । आवश्यक सामग्री : गुड / सक्खर , दुध, बटर, कुराउनी आलमोंड, काजु, छोरा, बदाम बनाउने विधि : दुधमा गुड / सक्खर राखेर पकाउने । केही छिन चलाउँदै पकाएपछि..
काठमाडौं, ३० साउन । शुक्रबारदेखि ह्यात होटलमा सीचुआँ फूड फेस्टिबल आयोजना हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि शुरु हुने फेस्टिबल आगामी अगस्ट २५ सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । चिनियाँ खानामा १३ वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएका सेफ यमबहादुर क्षेत्रीले सीचुआँनी खानाको परिकारहरु बनाउनेछन् । सीचुआँन खाना विश्वमा लोकप्रीय खाना मध्येमा पर्छ । १० दिनसम्म चल्ले फेस्टिबलमा विभिन्न किसिमका परिकारहरुको स्वाद लिन सकिनेछ । टमाटर र..
काठकमडाैं, २९ साउन । आलु चिप्स प्राय मानिसहरूकाे मन पर्ने खानेकुरा हाे । पछिल्लाे समय व्यस्त जिवन शैलीका मानिसहरूकाे मुदख्य खाजा नै बनेकाे छ आलु चिप्स । अहिले फास्टफुडमा सायद सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिज नै आलु चिप्स हो । आम रुपमा आलु चिप्सका प्याकेटको मूख्य ४० पचास रुपैयाँ पर्ला । तर दुनियाकै सबैभन्दा महंगो आलु चिप्सको मूल्य थाहा पाउनुभयो भने तपाईं हैरान..
पोखरा, १२ साउन । वर्षौंसम्म्म नबिग्रने विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्न हो, कोदो । मानिसको शरीरमा आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक हुने कोदोको उत्पादन भने कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छा र बसाइँसराइसँगै बर्सेनी घट्दै गएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा साउनको पहिलो सातातिर मकै भाँचेपछि सर्वसाधारणले कोदो रोप्ने गर्दछन् । विगतमा कोदो रोपाइँका कारण चापाचाप हुने गाउँबस्तीका अधिकांश बारी यतिखेर बाँझै छन् । कोदोको..
काठमाडौं, ८ साउन । ‘मेनु पल्टाई–पल्टाई हेर्यौं लास्टा रोज्ने मःम’ याे भनाइ पछिल्लाे समय निकै प्रचलित छ । अफिस होस् वा स्कुल–कलेज चमेना गृह, सबैतिर मःमःकै पारखीको भीड लाग्छ । सामान्य खाजा पसलमा पनि मःम नै रोजाइमा पर्छ । यो अधिकांशले रुचाउने खाजामा पर्छ। बच्चादेखि पाकासम्म मःमःका पारखी छन् । एउटै स्वादमा मःम खाँदा बोरिङ भएका पारखीले मःमःको थरिथरिका स्वादबाट आनन्द लिन सक्छन्..
काठमाडौँ, ३ साउन जापानको प्रख्यात खानाको परिकार ‘रामेन’ को स्वाद नेपाली तथा विदेशी ग्राहकले सहजै चाख्न पाउने भएका छन् । ‘होक्काइदो नेपाल विजनेश ग्रुप’ले जापानको प्राचीन ‘रामेन’ नेपालमा भित्र्याएको हो । काठमाडौँमा दुई रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरी सो परिकार भित्र्याइएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । परिकार बनाउने जापानी प्रविधि भित्र्याउनेदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म गरी हालसम्म रु दुई करोड ७५ लाख लगानी..
काठमाडौँ, २ साउन नेपालमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्यमैत्री खाद्य पदार्थमध्ये मेथी एक हो । मेथी नेपाली भान्सामा नियमित प्रयोग हुने मसला हो । मेथीलाई आयुर्वेदमा बहुगुणी र बहुआयामिक औषधिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले, यसलाई बहुगुणी वनस्पति मानिन्छ । मेथीको साग, गेडा, पानी, तेल, धुलो, टुसा र चिया आदि जे रूपले पनि खान सकिन्छ । अब जानौँ मेथीबाट बन्ने परिकारबारे..
काठमाडौं, १ साउन । खानाका सौखिनहरुका लागि लाफिंग मेनुमा रहेको राम्रो विकल्प बनेर आएको छ । साना स्टल देखि रेष्टुरेन्ट सम्ममा पाइने यो लाफिंग घरमा नै बनाएर खान सकिन्छ । घरमा बनाएको लाफिंग स्वादिष्ट साथै स्वस्थकर पनि हुन्छ । यल्लो लाफिंग बनाउनको लागि विधि : मैदाको पीठो मुछ्ने र त्यसलाई एउटा भाँडोमा राख्ने । त्यसलाई एउटा भाँडोमा राख्ने र त्यो भाँडोमा पानी राख्ने । अब..
काठमाडौँ, २६ असार रक्षा बन्धन र जनै पूणिर्मा जस्ता दुई ठूला पर्व नजिकिदैछन् । यी दुबै पर्व एकै दिन मनाइन्छ । यी दुबै पर्वको एउटा सामुहिक विशेषता छ, उक्त दिन हामी क्वाँटी खान्छौं । त्यसै पनि यो बर्खाको बेला झोलयुक्त खानेकुरा खाइन्छ, क्वाँटी भन्ने बित्तिकै हामी गेडागेडीको झोल नै सम्झन्छौं । यद्यपि, क्वाटी अर्थात गेडागुडीको झोल खानलाई कुनै चाडपर्व नै पर्खनु पर्छ..
Results 125: You are at page 1 of 5